Imaaraatka oo Tawaawac ka dhamaadday ka dib lacagtii looga qabtay Muqdisho. – Xeernews24
Imaaraatka oo Tawaawac ka dhamaadday ka dib lacagtii looga qabtay Muqdisho.
Dowladda yar ee Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horeysay waxa ay war tawaawac ah ka soo saartay lacagtii Ciidanka la dagaalanka Argagixisada ee Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ay ku qabteen Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Shaqaalaha Garoonka Diyaaradaha ayaa Diyaarad ay leedahay Imaaraadka oo Garoonka ku soo degtay ka shakiyay, kadibna baadhitaano ayay kula dhaqaaqeen iyaga oo kaashanaya Ciidanka ammaanka, waxayna ku soo qabteen lacag dhan 9.6 Milyan oo Dollar, taasi oo ku jirtay Saddex Boorso.
Imaaraadka wuxuu kaloo sheegay falka ka dhacay Garoonka Diyaaradaha inuu yahay dhaqan sharci daro ah, jabinayana sharciga caalamiga ah, iyada oo sidoo kale sheegtay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo xidhiidhka labada dal.
“Tallaabadani waa tallaabo sharci darro ah oo ka soo horjeeda qawaaniinnada diblomaasiyadeed ee asaasiga ah ee u dhaxeeya labada wadan iyo jebinta qodobbada Heshiiska Is-fahamka ee la saxiixay Novembar 2014.” Ayaa lagu yidhi Warka qoraalka ah ee ka soo baxay Imaaraadka.
Waxaa jira waddamo xidhiidh la leh Dowladda Federaalka oo taakuleeya laamaheeda kala duwan, balse taakuleynta dhaqaale waxaa Dowladda waxaa loo soo marsiiyaa habraac waa faqsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ah ee la xidhiidha isu-gudbinta lacagaha.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/imaaraadka-640x360.jpg 360 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-11 07:10:482018-04-11 07:10:48Imaaraatka oo Tawaawac ka dhamaadday ka dib lacagtii looga qabtay Muqdisho.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo Ankara kula kulmay madax Turki ah (Sawirro... Ciidamo tababar ku dhamaystey dugsiga tababarka Turki Som (Sawiro)